ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 46°50′N 8°20′E﻿ / ﻿46.833°N 8.333°E﻿ / 46.833; 8.333
"Unus pro omnibus, omnes pro uno" (လက်တင်)
"အများအတွက် တစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်အတွက် အများ"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "Swiss Psalm"
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရောင်)
ဥရောပတိုက်အတွင်း (အစိမ်းနှင့် မီးခိုးရင့်)
ဘန်းမြို့ (ဒီ ဖက်တို)
ဂျာမန်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ အီတလီဘာသာ၊
အီတလီ: svizzero/svizzera or elvetico/elvetica,
assembly-independent directorial သမ္မတနိုင်ငံ အောက်ရှိ Federal semi-direct democracy
ဂိုင်း ပါမီလင်၏ (သမ္မတ)
အီဂနာဇီယို ကာစစ် (ဒုသမ္မတ)
c. ၁၃၀၀[note ၁] (traditionally 1 August 1291)
၁၆၄၈ ခုနှစ် ‌အောက်တိုလာလ ၂၄ ရက်
၁၈၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၇ ရက်
၁၈၄၈ ခုနှစ် စက်တင်လာလ ၁၂ ရက်[note ၂]
၄၁,၂၈၅ km2 (၁၅,၉၄၀ sq mi) (အဆင့်: ၁၃၂)
၄.၃၄ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ)
• ၂၀၁၅ သန်းခေါင်စာရင်း
၂၀၇/km2 (၅၃၆.၁/sq mi) (အဆင့် - ၄၈)
$၅၈၄ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၈)
$၆၇,၅၅၇ (အဆင့် - ၉)
$၇၄၉ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၂၀)
$၈၆,၆၇၃ (အဆင့် - ၂)
နိမ့် · ၁၉
အလွန်မြင့် · ၂
ဆွစ် ဖရန့် (CHF)
ကျန် ၃ ပုံ ၁ ပုံမှာမြေဩဇာကောင်းမွန်ထက်သန်သော မြေနိမ့်လွင်ပြင်များဖြစ်သည်။ ထိုလွင်ပြင်များသည် ကွန်စတန့်နှင့် ဂျီနီးဗားရေအိုင်ကြီးနှစ်ခုအကြားတွင် တည်ရှိသည်။ အဓိကရ မြစ်ကြီးများမှာ ရုန်းမြစ်၊ အားမြစ်၊ ရိုင်းမြစ်၊ တိချီးနိုမြစ်တို့ ဖြစ်၏။ ရာသီဥတုမှာ နေရာကိုလိုက်၍ ကွဲပြားခြားနားလေရာ၊ မြင့်သောဒေသများ၌ နှစ်ပတ်လည်ဆီးနှင်းတို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၍၊ နိမ့်ရှိုင်းရာ တောင်ကြားများ၌ကား ပူနွေးသည်။ တိုင်းပြည်၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံမှာ တောများဖုံးအုပ်နေလျက်၊ ကျန် ၄ ပုံ ၁ ပုံမှာ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်၏။ သို့သော် ဆွစ်လူမျိုးများသည် အလွန်အပင်ပန်းခံနိုင်၍၊ ဝီရိယကောင်းသော လူမျိုးများဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ တောင်ကျချောင်းများ၊ ရေတံခွန်များမှ အင်အားကိုယူပြီးလျှင် စက်မှုအလုပ်ရုံများကို တည်ထောင်ကြ၏။ သို့ပင်ဖြစ်လင့်ကစား၊ အသီးအနှံလုံလောက်စွာ မထွက်သဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် အစားအစာအတွက် အခြားနိုင်ငံများကို မှီခိုအားထားရလေသည်။ တောနယ်ရှိ ဆွစ်လူမျိုးများမှာ အလွန်ဝီရိယကောင်း၍၊ ချွေတာကြသည်။ မြေကွက်တစ်ခုရှိက၊ ထိုမြေကွက်ကို အမှီပြုကာ၊ သားစဉ်မြေးဆက် အဆက်မပြတ် နေထိုင်တတ်ကြ၏။ ဂျူးရားတောင်တန်းနှင့် အဲ့လပ်တောင်တန်းများ၏ နေပူခံတောင်စောင်းများပေါ်တွင် စပျစ်နွယ်ပင်များ၊ သစ်သီးပင်များကို စိုက်ပျိုး၍၊ အရက်ချက်လုပ်၏။
ကျွဲနွားများမွေးမြူ၍၊ နွားနို့ထွက် ပစ္စည်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ရောင်းချကြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ ပိုးထည်၊ ချည်ထည်၊ နာရီနှင့် ကျောက်မျက် ရတနာများထွက်၏။ လှပသောသဘာဝရှုခင်းများ ရှိသည့်အပြင် သန့်ရှင်း အေးမြခြောက်သွေ့သော လေကောင်းလေသန့် ရနိုင်သဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်ပြည်မှာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ သွားရောက်နေထိုင်ရာဖြစ်၏။ လူအများ အပျင်းပြေသွားရောက် လည်ပတ်သော တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်၏။ အယ်လ်ပ် တောင်တန်းကို မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်းများဖြင့် ဖြတ်ကျော်ရာ၌ စိန် ဂေါ့တတ်နှင့် ဆင်ပလွန်စသော ထင်ရှားသည့် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကြီးများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဆင်ပလွန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှာ ၁၂ မိုင်ခွဲမျှရှည်၍၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော လိုဏ်ခေါင်းဖြစ်၏။ ထိုလိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိ လမ်းများဖြင့် အီတလီမှ မီးရထားများသည် ဆွစ်ဇာလန်သို့ ဖြတ်သန်းသွားရလေသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်မှာ ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖြစ်သည်။ ကန်တန်ခေါ် တောင်ကြား ပြည်နယ်များကို စုပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်၏။ ခရစ် ၁၂၉၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ တစ်ရက်နေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်ရှိ ပြည်နယ်သုံးနယ်တို့သည် ဟက်စဗတ်ဘုရင်များ၏ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းသော ပြည်နယ်တို့မှာ ရှစ်ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ၁၅၁၃ ခုနှစ်၌တစ်ဖန် ၁၃ ပြည်ထောင် တိုး၍လာလေသည်။ ၁၆၄၈ ခုနှစ်တွင် ယင်းသို့ပေါင်းရုံးဖွဲ့စည်းသော ပြည်နယ်ပေါင်းချုပ် အဖွဲ့သည် ရောမသာသနာစောင့် နိုင်ငံတော် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်၍၊ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ၁၈ဝ၃ ခုနှစ်၊ နပိုလီယန်ဘုရင်လက်ထက်၌ ပြည်နယ်ပေါင်း ၁၉ ပြည်နယ်တိုးလာပြန်သည်။ ၁၈၁၅ ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအား လွတ်လပ်သော ကြားနေနိုင်ငံဟူ၍ ဩစတြီးယား၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပရပ်ရှား၊ ရုရှ၊ စပိန်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့က အသိအမှတ် ပြုကြလေရာ၊ ထိုနှစ်တွင် နောက်ထပ်ပြည်နယ် ၃ နယ်တိုးလာ၍၊ အားလုံးပြည်နယ်ပေါင်း ၂၂နယ်ဖြစ်လာသည်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားမှ အနှောင့်အယှက်ကင်းသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ၁၈၇၄ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်မူကား၊ ထိုအခြေခံဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ကို ပြန်လည်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ၊ ယနေ့တိုင် ထိုအခြေခံဥပဒေသည် တည်မြဲလျက် ရှိလေသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် အများအားဖြင့် ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့် ဂျာမန်စကားတို့ကို ပြောဆိုသုံးစွဲကြ၏။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၈၁၇၉၂၉၄ ယောက်ခန့်ရှိသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်း တက္ကသိုလ် ၇ ခုမျှရှိ၏။ မြို့တော်မှာ ဗန်းမြို့ဖြစ်သည်။ အခြားမြို့ကြီးများမှာ ဇူးရစ်၊ ဗားလ၊ ဂျီနီးဗား၊ လူဇန်း၊ ဖရီးဗူး၊ နျူရှားတဲမြို့များဖြစ်၏။ လူဦးရေ ၁ဝဝဝဝ ကျော်သော မြို့ကြီး ၂၅ မြို့ခန့်ရှိ၏။ ဂျီနီးဗားမြို့မှာ ယခင်က နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီး တည်ရာဌာနဖြစ်ခဲ့၏။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ အလှအပအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများစွာထွက်၍၊ နာရီအမျိုးမျိုး၊ နာရီနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်း၊ ဓာတ်စက်၊ ခြေချင်း၊ လက်ကောက်များမှစ၍ နို့ဆီ၊ ဒိန်ခဲ၊ ချောကလက်စသော စားစရာများကို လုပ်ကိုင်ရာ ဆွစ်တိုင်းသူပြည်သားများတွင် မိန်းမများက အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီးလျှင်၊ ယောက်ျားများက အလုပ်ကြမ်းနှင့် လမ်းပြအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကို ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြင့် ဆွစ်ဇ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း (ဆွစ်ဇ်နိုင်ငံ အဖွဲ့အစည်း) ဟု ခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိပြီး ကန်တွန် (ဖက်ဒရယ် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်) ၂၆ ခု ပါဝင်သော ဖက်ဒရယ် သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဘန်းသည် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ အချက်အချာ ဒေသဖြစ်သည်။ အနောက်ဥရောပတွင် တည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် အီတလီနိုင်ငံ နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ဩစတြီးယားနိုင်ငံနှင့် လစ်တင်ရှတိုင်းနိုင်ငံ တို့က ဝန်းရံထားသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် ကုန်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ပထဝီအနေအထားအားဖြင့် အယ်လ်ပ် တောင်တန်း၊ အလယ်ပိုင်းမြေပြန့်နှင့် ဂျူရာတောင်ကုန်းများတွင် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း စုစုပေါင်း ၄၁,၂၈၅ ကီလိုမီတာ ( ၁၅,၉၄၀ စတုရန်းမိုင်) မျှ ဖြန့်ကျက်တည်ရှိသည်။ အယ်လ်တောင်တန်းသည် နယ်မြေ၏ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများတွင် တည်ရှိသော်လည်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၇.၈ သန်းမှာ မြေပြန့်ဒေသတွင်သာ စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။ မြို့ကြီးများကိုလည်း ထိုမြေပြန့်ဒေသတွင်သာ တွေ့ရပြီး ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးများ စာရင်းဝင်နှင့် စီးပွားရေး အချက်အချာ ဖြစ်သော ဇူးရစ်ချ်မြို့ နှင့် ဂျနီဗာမြို့ တို့ကို ထိုနေရာတွင် တွေ့ရသည်။
၃.၂ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်
၅ စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ
စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ A solemn declaration of the Tagsatzung declared the Federal Constitution adopted on 12 September 1848. A resolution of the Tagsatzung of 14 September 1848 specified that the powers of the institutions provided for by the 1815 Federal Treaty would expire at the time of the constitution of the Swiss Federal Council, which took place on 16 November 1848.
↑ Holenstein, André (2012). "Die Hauptstadt existiert nicht" (in de). UniPress – Forschung und Wissenschaft an der Universität Bern 152 (Sonderfall Hauptstatdtregion): 16–19. Berne: Department Communication, University of Berne. doi:10.7892/boris.41280. “Als 1848 ein politisch-administratives Zentrum für den neuen Bundesstaat zu bestimmen war, verzichteten die Verfassungsväter darauf, eine Hauptstadt der Schweiz zu bezeichnen und formulierten stattdessen in Artikel 108: «Alles, was sich auf den Sitz der Bundesbehörden bezieht, ist Gegenstand der Bundesgesetzgebung.» Die Bundesstadt ist also nicht mehr und nicht weniger als der Sitz der Bundesbehörden.”
↑ "Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns" (December 2005). French Politics3(3): 323–351. doi:10.1057/palgrave.fp.8200087.
↑ Elgie, Robert (2016). "Government Systems, Party Politics, and Institutional Engineering in the Round". Insight Turkey 18 (4): 79–92. ISSN 1302-177X.
↑ Kley, Andreas: Federal constitution in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland,3May 2011.
↑ Surface water and surface water change။ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)။ 24 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jacqueline Kucera; Athena Krummenacher, eds. (22 November 2016)။ Switzerland's population 2015 (PDF) (official report)။ Swiss Statistics။ Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office (FSO), Swiss Confederation။ 20 December 2016 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။7December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ World Economic Outlook Database, October 2019။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။ 26 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey။ Eurostat။ 25 October 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Human Development Report 2019 (PDF) (in en)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် (10 December 2019)။ 30 April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ&oldid=708047" မှ ရယူရန်
Romanshဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။